काठमाण्डौ । साविकको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको बोनस सेयर करबापत रकम तिरेपछि मात्र सेयरधनीहरुले पाउने भएका छन्। सिटिजन्स बैंकले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै साविकको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको गत २ आर्थिक वर्षको बोनस सेयर पाउनका लागि सेयरधनीहरुलाई करबापत रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो। सिजिटजन्स बैंक इन्टरनसेनलले हालै...
सिटिजन्स बैंकको विशेष साधारणसभाबाट सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने अजेन्डा अनुमोदन
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको आज बिहीबार सम्पन्न सातौँ वार्षिक साधारणसभाले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। काठमाण्डौको दरबारमार्गस्थित नारायणहिटी पथमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा जुममार्फत गरिएको विशेष साधारणसभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीबाट प्रस्तुत...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले अब घरै बसी–बसी रु. २ लाखसम्म कर्जा पाउने
काठमाण्डौ । ‘हजुरको प्रगतिको सहयात्री’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरी अनवरत रूपले नेपाली जनताको घरदैलोमा बैंकिङ सेवा पुर्याउँदै आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिसँग सहकार्य गरेर आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधाका लागि ‘पेडे लोन’ नामक नयाँ कर्जा सुविधा सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाण्डौको �...
कोभिड व्यवस्थापनमा सिटिजन्स बैंक उदाहरणीय, कर्मचारी बचाउन केयरिङदेखि हेलिकोप्टर चार्टरसम्म
काठमाण्डौ । तपाई एकाएक गम्भीर बिरामी पर्नुभयो । यति गम्भीर कि तपाई रहेको स्थानमा उपचार असंभव भयो र तत्काल हेलिकोप्टर चार्टर गरेर सुगम ठाउँमा जानुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा तपाई कार्यरत संस्थाले नै सबै चिजको व्यवस्थापन गरिदेला भनेर सोच्नुहुन्छ ? बिरलैले मात्र सोच्लान् । यत्रो ठूलो सहयोग पाएर आफूले नयाँ जीवन पाइएला भनेर जुम्लाको...
प्राप्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सिटिजन्स बैंक र सिर्जना फाइनान्सले एकैदिन डाके विशेष साधारणसभा
काठमाण्डौ । प्राप्ति प्रक्रिया अनुमोदन गर्न सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडले एकैदिन विशेष वार्षिक साधारणसभा डाकेका छन्। हिजो जेठ ११ गते सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। आज दुवैले एक सूचना जारी गर्दै आउँदो जेठ २७ गते विशेष वार्षिक साधारणसभा डाकेका...
सिटिजन्स बैंकको सूचना अधिकारीमा राजेन्द्रलाल र प्रवक्तामा नारायणराज नियुक्त
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले सूचना अधिकारीमा राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रवक्तामा नारायणराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। बैंकको प्रवक्तामा कार्यरत उमंग शर्माले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा अन्य अनुभवी बैंकरलाई ल्याइएको हो । करिब २२ वर्ष देखि बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्दै आएका राजेन्द्रलाल...
सिटिजन्स बैंकको १६८ औं शाखा रौतहटको गरुडामा
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १६८ औँ शाखा रौतहटको गरुडामा सञ्चालनमा ल्याएको छ। आज बुधबार उक्त शाखा कार्यालयमा पूजा पाठ गरी बैंकिङ कारोवारको सुरुआत गरिएको छ। गरुडासँगै सबै शाखामार्फत ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा...
कोरोना कहर : लुम्बिनी प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकका यी ४ शाखा बन्द
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले लुम्बिनी प्रदेशका ४ शाखा आज वैशाख १४ गतेबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, बढैयाताल, कोहलपुर र कान्छीबजारस्थित बैंकका शाखाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वव्यापी रुपमा...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्रनेसनल लिमिटेड आजबाट १५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपालीलाई वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो बैंक २०६४ वैशाख ७ गतेदेखि २० औँ वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापना भएको हो। वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले आफ्ना समस्त ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकाय, कर्मचारी तथा शुभचिन्तकमा हार्दिक आभार व्यक्त गरेको...
उदयपुरका लालपत्तामा सिटिजन्स बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशका विभिन्न दुर्गम स्थलका बासिन्दाहरुलाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको छ। यसै क्रममा बैंकले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६ लालपत्तामा १०९ औँ शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेको छ। लालपत्तामा उक्त सेवा...
काठमाण्डौ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र दरबारमार्गस्थित किङ्गस लाउञ्जबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। किङ्गस लाउञ्जसँगको यो सहकार्यपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ। हालसम्म सिटिजन्स बैंकको कार्ड नभएका ग्राहकलाई तत्कालै नयाँ...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले होटेल एम्बासडरमा विशेष छुट पाउने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काठमाण्डौको लैनचौरस्थित होटेल एम्बासडरबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त समझदारीपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले होटेल एम्बासडरको सेवा सुविधामा विशेष छुट पाउनेछन्। हालसम्म सिटिजन्स बैंकको कार्ड नभएका ग्राहकलाई पनि...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ‘यूएसडी ई–कम कार्ड’ को सुरुआत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रिपेड कार्डसम्बन्धी परिपत्रअनुसार बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई यो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो। यो सुविधाअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो सिटिजन्स बंैैकको खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँलाई सटही गरी...
काठमाण्डौ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १६७ औँ शाखा सिराहाको लहानमा आज बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। लहान शाखा कार्यालयमा पूजापाठ गरी बैंकिङ कारोबारको सुरुआत गरिएको छ। उक्त समारोहमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई अलिव कबाव सुलतानेट रेस्टुरेन्टमा विशेष छुट
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका कार्डवाहक ग्राहकले काठमाण्डौको टंगालस्थित अलिव कबाव सुलतानेट रेस्टुरेन्टमा विशेष छुट पाउने भएकाछन्। सिटिजन्स बैंक र उक्त रेस्टुरेन्टबीच बैंकका कार्डवाहक ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मध्यपूर्वी भोजनको विशिष्ट स्वाद नेपालमै पस्कने उद्देश्यका साथ...